မော့စ် agate - ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် - မွစျကားမဟူရာ - cryptocrystalline - ဗွီဒီယို
Buy natural moss agate in our shop
မော့စ် agate ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကနေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Semi-အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဆိုင်သောကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်ရေညှိရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များသည်အခြားပုံစံများဖွဲ့စည်း, ကျောက်ကိုအတွက် embedded အစိမ်းရောင်အရောင်များ၏သတ္တုဓာတ်ပါဝင်သောမွစျကားမဟူရာတစ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသို့မဟုတ် milky-အဖြူလင်းကျောက်ဖြစ်ပြီး, ပါဝင်သည်သတ္တုဓာတ်အဓိကအားမန်းဂနိစ်သို့မဟုတ်သံအောက်ဆိုဒ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှု banding ၏ agate ရဲ့ defining အင်္ဂါရပ်ကင်းမဲ့အဖြစ်က agate ၏စစ်မှန်သောပုံစံမဟုတ်ပါဘူး။ မော့စ် agate ရေညှိနှင့်ဆင်တူကြောင်းအစိမ်းရောင်ပါဝင်နိုင်နှင့်အတူအဖြူရောင်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနေရာများစွာကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအရောင်များထိုကဲ့သို့သောမှာ chrome သို့မဟုတ်သံကဲ့သို့, တစ်ခုညစ်ညူးအဖြစ်သတ္တုပစ္စုပ္ပန်၏ပမာဏခြေရာကောက်ရန်ကြောင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အဆိုပါသတ္တုများကိုသူတို့ valence, ဓာတ်တိုးပြည်နယ်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၎င်း၏အမည်ကိုနေသော်လည်းရေညှိ agate အော်ဂဲနစ်ဆံ့မများသောအားဖြင့်ရာသီဥတုမီးတောင်ကျောက်တို့မှဖွဲ့စည်းသည်။
Montana moss agate is found in the alluvial gravels of the Yellowstone River. Its tributaries between Sidney and Billings, Montana. It was originally formed in the Yellowstone National Park area of Wyoming asaresult of volcanic activity. In Montana the red color is the result of iron oxide. And the black color is the result of manganese oxide.
Chalcedony isacryptocrystalline form of silica. It is compose of very fine intergrowths of သလင်းကျောက် and moganite. These are both silica minerals. But they differ in that quartz hasatrigonal crystal structure. While moganite is monoclinic. Chalcedony’s standard chemical structure. It is based on the chemical structure of quartz, is SiO2 (silicon dioxide).
မွစျကားမဟူရာတစ် waxy တောက်ပရှိပါတယ်။ ဒါဟာ semitransparent သို့မဟုတ်လည်းစနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအရောင်များ၏ကျယ်ပြန့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အများဆုံးမြင်ကြသူများ, မီးခိုးရောင်မှအဖြူ grayish-အပြာသို့မဟုတ်ကိုလည်းဖျော့ထံမှနီးပါးအနက်ရောင်အထိအညိုရောင်တစ်ဦးအရိပ်ဖြစ်ကြ၏။ စီးပွားဖြစ်ရောင်းချခဲ့မွစျကားမဟူရာ၏အရောင်ကိုမကြာခဏဆေးဆိုးသို့မဟုတ်အပူအားဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသည်။